स्तन चाहेजति ठूलो-सानो र टाईट बनाउन चाहानुहन्छ भने यो उपाय अपनाउनुहोस् | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ पुष २०७५, बिहीबार १०:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौ । महिलाका लागि स्तन गहना हो भने शिशुको लागि अमृत हो । दाम्पत्य जीवन होस् र शारिरीक सुखमय जीवनमापनि स्तनको अति महत्व छ । यौनसम्पर्कका लागि उत्तेजित बनाउने अंगको रुपमापनि चिनिन्छ । स्तन शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन् । यौनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । पुष्ट स्तन भएका महिला आकर्षक मानिन्छन् । यसैलेपनि महिलाहरु स्तन पुष्ट र टाईट राख्न अनेक उपाय अपनाएका हुन्छन् । स्तनको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ । स्तनको आकार तथा आकृतिको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ । स्तनसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । यसको आकार वा आकृतिका बारेमा स्वास्थ्यभन्दा सुन्दरताका कारणले बढी चिन्ता गरिने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । व्यक्तिअनुरूप स्तनको स्वरूप एवं आकारमा धेरै विविधता पाइन्छ । स्तनमा भएका तन्तुका आधारमा यो कुनै ठूलो वा सानो हुन्छ । सामान्यतयाः स्तनको आकार वा स्वरूपलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कुरा निम्न छन्ः
स्तनका तन्तुको मात्रा, पारिवारिक इतिहास, उमेर, तौल बढ्नु वा घट्नु, स्तनको छालाको मोटाइ वा तन्कन सक्ने गुण, रागरस हार्मोनहरूको प्रभाव । स्तनको विकासका क्रममा यसको आकार र कडापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ । किशोरावस्थामा स्तनको तन्तु बढ्दै जाँदा यो गोलाकार हुन्छ र त्यति बेला यसका तन्तुहरू पनि निकै खाँदिएका हुनाले वयस्क उमेरका महिलाभन्दा कडा हुन्छ । उमेर बढ्दै गएपछि स्तनको खँदिलोपन पनि घट्दै जाने हुनाले पहिलेको तुलनामा नरम हुँदै जान्छ । स्तनको आकारमा वंशाणुगत प्रभाव एकातिर हुन्छ भने अर्कातिर पोषणको । यी दुवैको संयुक्त प्रभाव स्तनको आकार निर्धारणमा महत्वपूर्ण छ । आमा र दिदीहरूको स्तनको आकार प्रकारसँग धेरै मिल्नु वंशाणुगत कारण हुनसक्छ ।
कसरी बढाउने ?
आज हामी स्तन बढाउने एउटा प्रोडक्टको बारेमा बताउँदै छौ । यसले खुबै राम्रो गरेको प्रतिक्रिया छ । स्मिता साहू यसबारे लेख्छिन् । मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा बढी निराशा तपाईहरुबीच प्रस्तुत गर्छु । २ वर्ष पहिले मैले एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने मन बनाए । मिस इंडिया मैले पहिलो चरण बहुत सकसले पार गरे । मेरा मोहभंग अन्तिम १० मा नपुग्दै बाहिरीन पुगे । यो हारको कारण मेरा स्तन भएको मलाई महसुस भयो । कार्यक्रम समितिका एक व्यक्तिका अनुसार निर्णायकले मेरो बिकनी प्रदर्शन बहुत कमजोर भएको अर्थ लगाएका थिए । उनीहरु मेरा स्तनका आकारमा खुशी नभएको थाहा पाएपछि मलाई आफ्ना स्तनदेखि चिन्ता लाग्न थाल्यो । किनकी मेरा स्तनको आकारपनि निक्कै सानो नै थियो । मेरो पुरै परिवारमा कसैकोपनि स्तन ठूलो थिएन । मलाई लाग्यो यो वंशानुगत समस्या हो । मलाई विश्वास थियो उक्त सुन्दरी प्रतियोगितामा मेरो हार हुन्न तर स्तनकै कारण भनेपछि मैले उपाय खोज्न थाले ।
प्रतियोगितापछि म निक्कै निरास भए । मेरो परिवार, अभिभावक र भाईले मलाई खुबै सम्झाए । केवल एक प्रतियोगितामा हार्दा जीवन खत्तम हुँदैन । आफुलाई सुधार्दै अघि बढ्ने गुरु मन्त्र मलाई मिल्यो । उनीहरुले नै मलाई बताए की स्तन ठुलो बनाउन कुनै सकस भोग्नु पर्दैन । स्तनको आकार बढाउनका लागि म कस्मेटिक सर्जरी गर्ने निर्णय लिँदै थिए । त्यही बेला मेरी इंग्लैंडमा बस्ने काकीले बताउनुभयो की Bust-full नामको जेल बजारमा आएको छ । ब्रिटिश महिलाहरु साना स्तन मन पराउँदैनन् । यसैले उनीहरुका लागि यो जेल बनेको छ । यो प्राकृतिक घटबाट बनेकाले कुनै असर छैन भन्नुभयो । त्यसपछि मैले यही प्रयोग गर्न सुरु गरे । नभन्दै मेरो स्तनमा यो जेलले चमत्कारी परिवर्तन ल्यायो ।
यो लेखका लागि आएको एक प्रश्नकोपनि डाक्टर मार्फत हल गरेका छौ । प्रश्न थियो । मेरा दुबै स्तन अति नै साना छन् । बढाउन चाहान्छु कसरी होला ? अनि स्तन किन कसैको ठूला र साना हुन्छन् ? निशा
निशा जी तपाईले आफूलाई पातली भन्नुभए पनि तौल लेख्नुभएको छैन । शरीरको तौलअनुसार अन्य भाग जस्तो ठयाक्कै नहुने भए पनि तौल कम हुँदाको स्तन पनि सानो हुने स्थिति रहन्छ । हामी शरीरको बडी मास इन्डेक्स बोसो कति छ हेरेर तौल सामान्य भन्दा कम वा बढी भएको निक्यौल निकाल्छौं । सामान्यतः हामी वयस्क व्यक्तिको उचाइ र तौलका आधारमा शरीरमा कति ‘बोसो’ छ नाप्छौं । यसलाई बोसो भनिन्छ । हुन त यो पद्धतिका पनि आफ्नै सीमितताहरू छन् । यो बोसो यदि १८ दशमलव ५ देखि २४ दशमलव ९ सम्म छ भने त्यसलाई सामान्य तौल मानिन्छ । यो २५ देखि २९ दशमलव ९ सम्म भएको स्थितिमा तौल बढी भएको मानिन्छ भने यो ३० भन्दा बढी भएको स्थितिमा ‘मोटो’ बोसो भनिन्छ । त्यसैगरी १८ दशमलव ५ भन्दा कम दक्ष भएको व्यक्तिलाई कम तौल भएको मानिन्छ ।
तपाईंको उचाइ ५ दशमलव ४ इन्च र तौल ४५ किलोग्राम छ, भने तपाईंको दक्ष यस्तै १७ हुन्छ । यो तौल सामान्यभन्दा कम हो । त्यसैले पोषणमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । पहिले तौल बढी भएर पछि घट्न गएको स्थितिमा पनि स्तनको आकारमा कमी आउनुका साथै कसिलोपनमा पनि कमी आउन सक्छ अर्थात् नरम हुनसक्छ । तौलमा थोरैमात्र उतार चढाव हुँदा स्तनमा परिवर्तन नदेखिन सक्छ । घरेलु उपाय गरेर स्तनको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी तवरले बढाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन, तर कतिपय समाजमा ठूला आकारका स्तनलाई आकर्षक मानिने भएकाले यसलाई ठूलो बनाउन महिलामाथि दबाब हुन्छ । सौन्दर्यसँग स्तनको आकार तथा आकृति जोडिने भएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसै कारणले संसारभर नै स्तनलाई बढाउन वा आकर्षक देखाउन विभिन्न विधि प्रयोग हुने गरिएको देखिन्छ । छोटकरीमा केही प्रमुख विधिको चर्चा गरौं ।
क्रिम प्रयोग गरेर स्तन वा मुन्टोको मालिसले स्तनको आकार बढ्ने दाबी गरिए पनि यसले ‘स्थायी’ रूपमा आकार बढ्छ भन्ने कुरा प्रमाणित छैन । केही कसरतले छातीको मांसपेशीलाई बलियो र ठूलो बनाउँछ र यस्तो स्थितिमा स्तन ठूलो भए जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसले स्तनको ‘कपको आकार’ लाई परिवर्तन गर्दैन । विभिन्न रसायनिक औषधियुक्त मल्हमको प्रयोग अर्को उपाय हो । उत्पादनकर्ताको भनाइमा यस्ता मल्हमले सीधै स्तनको तन्तु तथा कोषमा कार्य गरेर त्यसको वृद्धि गराउँछ । हाल स्तन बढाउने विभिन्न किसिमका खाने चक्की विश्व बजारमा उपलब्ध हुन थालेका छन् । जडिबुटी पनि भएको दाबी गरिएका ती औषधि निर्माणकर्ताहरूको भनाइमा यसको सफलता निकै छ । जे सुकै दाबी गरिए पनि अमेरिकी संस्थाहरुले यस्ता कुरा प्रमाणित गरेका छन् । त्यसबाहेक स्तनको आकारमा वृद्धि गर्न पम्पको प्रयोग पनि निकै चर्चामा छ । शल्यक्रिया एउटा अर्को प्रचलित उपाय हो । शल्यचिकित्साले नकारात्मक प्रभावबिना नै नतिजा दिन सक्ने दाबी गरिए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन । शल्य चिकित्सा गरेर स्तनको आकार बढाउन सकिन्छ, तर अत्यधिक खर्चका साथै शल्य चिकित्साको कुप्रभावको असर खप्नुपर्ने हुनसक्छ । तपाईंले फोम भएको ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ । स्तन कसैलाई देखाउनुपर्ने अङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अङ्ग हो । यसलाई आकर्षक देखाउने अन्य उपाय जस्तैः थुनचोली ब्राभित्र कपडा, कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्ने वा स्तनलाई माथितिर उचाल्ने साधनहरूले आकर्षण थप्छ । श्रीमान्लाई तपाईंको स्तनका सम्बन्धमा कुनै गुनासो छैन भने यो एउटा राम्रो उपाय हुनसक्छ । स्तन सानै भए पनि त्यसले यौन सुख दिन दूध उत्पादन गर्न सक्छ ।
अर्को प्रश्न यस्तो थियो । जसले नाम नखुलाउने सर्त राख्नुभएको थियो ।
म स्रोह वर्षीया युवती हुँ । मलाई ज्ञान भएअनुसार महिलाको स्तन विकास १४ देखि १६ वर्षभित्रमा भैसक्छ । यो अङ्ग महिलाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ, तर मेरो भने धेरै सानो छ र अरूका अगाडि मलाई असजिलो महसुस हुन्छ । यदि स्तनलाई प्राकृतिक रूपमा बढाउने कुनै उपाय छ भने कृपया बताइदिनु होला ।
(स्तन एक विशेष किसिमको ग्रन्थि हो, जसले सन्तान उत्पादनपछि पोषणका लागि दूध बनाउँछ । बाल्यकालमा केटा र केटीको स्तन उस्तै हुन्छ, तर किशोरावस्थामा पुगेपछि केटीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । स्तनको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ । सामान्यत : दुई–तीन वर्ष ढिलो–चाँडो हुन सक्छ । तपाईंले भन्नुभएको १६ वर्षभन्दा केही पछिसम्म पनि जान सक्छ ।
स्तनको विकासका चरणहरू : स्तनको विकासको कुरा गर्दा आकृति (shape), आयतन (size) लाई नै Tanner Stage भनिने पाँचवटा चरणमा बाँडिएको छ ।
पहिलो चरण : यो किशोरावस्थाभन्दा पहिलेको अवस्था हो । यो अवस्थामा स्तनको मुन्टो मात्र उठेको हुन्छ ।
दोस्रो चरण : BUM जस्तो देखा पर्छ, स्तन र मुन्टो अलिकति माथि उठेको हुन्छ । Areola (मुन्टोको वरिपरिको कालो रंगको छाला भएको क्षेत्र) अलि ठूलो भएर आउँछ ।
तेस्रो चरण : स्तन अझ बढ्छ र ग्रन्थीय तन्तु (glandular tissue) बन्छ ।
चौथो चरण : Areola र मुन्टो अझ उठ्छ, स्तनको सबै भागमा थप वृद्धि हुन्छ ।
पाँचौं चरण : स्तन वयस्कको जस्तै विकसित हुन्छ, स्तनले गोलाकार आकृति लिने स्तनको अन्य भागको सतह समान हुन्छ र मुन्टो मात्र उठेको स्थितिमा हुन्छ ।
पूर्ण विकसित स्तनको आकारमा प्रशस्त भिन्नता पाइन्छ । गर्भवती र स्तनपान गराइरहेको अवस्थामा स्तन ठूलो हुन्छ । व्यक्तिको वजन धेरै भए यसको साइज पनि ठूलो हुन्छ । किशोरावस्थामा स्तनको वृद्धि तीव्र हुनुको मुख्य कारण स्तनमा बोसो जम्मा हुनु हो र स्तनको आकार (आयतन) निर्धारण गर्ने मुख्य कुराचाहिँ हार्मोन हो, त्यसैले यसको आयतनलाई सजिलै परिवर्तन गर्न सकिँदैन । माथिका चरणहरूले स्तनको विकासलाई देखाउँछ नकि यसको वास्तविक आकृति वा आयतनले ।
स्तनको आकार र आयतनको महत्व
तपाईंले भन्नुभएजस्तै यसको महत्व छ । महिलालाई यौन आकर्षक बनाउँछ र स्तनको स्पर्श महिला तथा पुरुष दुवैका लागि यौन आनन्दको स्रोत हुन्छ । स्तनको आकृति तथा आयतनको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ । कतिले यसलाई आत्मसम्मानको कुरा मान्छन् । महिलाहरूले स्वास्थ्यभन्दा सुन्दरताका कारण स्तनको चिन्ता बढी गर्छन् भनिन्छ । तपाईं चासोको मूल जरा पनि यही हो । अचेल शरीरलाई अति नै दुब्लो तर स्तनचाहिँ ठूला हुनुपर्ने फेसन छ, जुन त्यति सजिलो छैन । फेरि चित्रहरूमा जुन चलाखीले स्तनलाई आकर्षक बनाइएको हुन्छ, हाम्रो सामाजिक जीवनमा त्यसो गर्न सजिलो पनि छैन, कतिपय अवस्थामा हामी दिग्भ्रमित हुन पुग्छौं । आमसञ्चारमा चित्रित गरिने व्यक्तित्वहरू आम व्यक्तिभन्दा फरक हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । हामी सबैको शरीर तथा आनीबानी आमसञ्चारमा देखाइएका पात्रको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सानो स्तन हुँदैमा यौन क्रियाका लागि आवश्यक संवेदनशीलता वा शिशुलाई स्तनपान गराउने कुरामा असक्षम हुने होइन । केही पुरुष ठूला स्तनप्रति आकर्षित भए पनि वास्तविक यौन क्रियामा स्तनको आयतनलाई नै सुखमय यौनजीवनको मुख्य मुद्दा बनाउँदैनन् । त्यसैले साना स्तन हुनेहरूको वैवाहिक जीवन पनि सहज र रमाइलो भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
स्तन ठूलो बनाउने उपाय :
मुख्यतयास् स्तनको आकारको निर्धारण आन्तरिक रस (हार्मोन) हरूले गर्ने भए पनि व्यायाम तथा पोषणको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । तपाईंको तौल के–कस्तो छ नलेखिएकाले यसै भन्न सकिएन । अर्को कुरा, तपाईंकी दिदी हुनुहुन्छ भने उहाँको स्तन कत्रो छ ध्यान पुर्‍याउनुहोला । कतिपय दिदी–बहिनीमा समानता रहेको पाइन्छ । तपाईंले भन्नुभएजस्तो प्राकृतिक उपायको कुरा अलि गार्‍है छ । विभिन्न किसिमको खाने तथा लगाउने हार्मोनयुक्त औषधी वा पम्प बजारमा उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रभावकारिता वा विश्वसनीयता विवादग्रस्त नै छ । कतिपय समाजमा ठूला आकारका स्तनलाई आकर्षक मानिने भएकाले कतिपय विकसित मुलुकमा शल्यक्रिया ९mबmmयउबिकतथ० गरेर स्तनको साइज बढाउने चलन नै चलेको छ । यो निकै खर्चिलो भएको र शल्यक्रिया तथा यसमा प्रयोग गरिने वस्तुहरूको नकारात्मक असर पर्न थालेको देखिएकाले त्यसका वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा पनि निकै प्रचार गर्न थालिएको छ ।
तपाईंलाई थाहै छ, स्तन खुला राख्नु नपर्ने अङ्ग हो । यसको उभारलाई शल्यक्रिया नै नगरी बढी भएजस्तो देखाउन सकिन्छ । थुनचोली ९ब्रा० भित्र कपडा, कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्नुबाहेक स्तनलाई माथितिर उचाल्न प्रयोग गरिने साधनहरूले स्तनको वास्तविक साइजमा परिवर्तन नगरे पनि देख्दा स्तन ठूलो भएको भान पर्न सक्छ र सुन्दरतामा वृद्धि हुन्छ । यसैगरी स्तनलाई पूरै ढाक्ने साधन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसको मद्दतले स्तन २ साइजसम्म ठूलो भएको भान पार्न सकिन्छ । यसैगरी आफ्नो वक्षस्थलमा उभार ल्याउन बाक्लो तरल सिलिकोन भएका साधनहरू पनि उपलब्ध छन् । ब्राभित्र लगाउन मिल्ने यस्ता साधन प्रयोग गर्दा लुगा बाहिरबाट स्पर्श गर्दासमेत सजिलै वास्तविक स्तन हो–होइन भन्न सकिँदैन । यी साधनको प्रयोगले स्तनको आकारलाई यस्तै १ वा २ साइज बढी बनाउन सकिने भएकाले ब्रा पनि त्यही आकारको लगाउनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोग
अनुदानका संरचनाः न घर, न धन्सार-अनुदान लिएर बनेका संरचना दया लाग्दा !
काठमाडौं । भूकम्पको अनुदान लिएर बनेका संरचना ‘न घर न धन्सार’ भएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले उपलब्ध गराएको आवास निर्माण…
स्त्री-पुरुषबीच सात भिन्नता
काठमाडाैं । नारी र पुरुषबीच ज्यादै निकटको सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्ध चाहे पति–पत्नीबीचको होस्, चाहे भाइ–बहिनी, बाबु–छोरी या आमा–छोराबीचको…
नेपालीलाई घर भत्काउन सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको धम्की
काठमाडौं । सुस्तामा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले नेपाललीलाई घर भत्काउनको लागि धम्की दिएका छन्।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर किन बनाएको बन्दै…
विदेश पढ्न जान १२ पास हुनै पर्ने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई मात्र विदेशमा पढ्न जाने अनुमति दिने भएको…
काठमाडौं । भारतीय गायक सोनु निगम थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । एउटा गीतको भिडियो सुटिङका लागि नेपाल…
टेलिकमले ल्यायो अत्यन्तै सस्तोमा नयाँ सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मिस्ड कल एलर्ट (Missed Call Alert – MCA) सेवालाई पुनः सञ्चालन गरेको छ ।